Horonan-tsary - The Word Foundation • Thinking and Destiny and HW Percival
Ny Video Foundation Foundation
Fisainana sy faniriana, by Harold W. Percival, dia nambaran’ny maro ho boky feno indrindra hatramin’izay nosoratana momba ny olombelona sy izao rehetra izao. Tamin'ny pirinty nandritra ny 70 taona mahery, dia namoaka hazavana mamirapiratra momba ireo fanontaniana lalina izay nanahiran-tsaina ny olombelona hatramin'izay. Ny pejinay Video dia misy famelabelarana am-peo amin'ireo pejy 3 voalohany amin'ny Fampidirana ary topy maso, mampiasa ny tenin'i Percival, amin'ny fomba tsy mahazatra Fisainana sy faniriana nosoratana.
Harold Percival dia nanoritsoritra ny traikefa mahery sy tsy ara-pihetseham-po ho an'ny fahatsiarovany ny fahatsiarovan-tena ao amin'ny sasin-tenan'ny magnum opus, Fisainana sy faniriana. Ity horonan-tsary ity dia fitantarana avy amin'ireo pejy ireo. Ity no hany tranga nampiasana ny olona "I" voalohany. Tsy hita na aiza na aiza ao Fisainana sy faniriana. Percival nanambara fa aleony ny boky dia miorina amin'ny fahamendrehany ary tsy manohintohina ny toetrany.
Ny lahatsary eto ambany dia ahitana feo feno Fampidirana—ny toko voalohany manontolo—to Fisainana sy faniriana nataon'i Harold W. Percival. Ity famakiana ity dia avy amin'ny andiany faha-11.
Mpianatra ny Fisainana sy faniriana, Joe, dia mizara ny heviny momba ilay boky sy ny fiantraikan’izany teo amin’ny fiainany.